OpenProject: စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဝဲလ်၏ဗားရှင်း ၁၁.၃.၁ အသစ် Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | 10/06/2021 06:00 | applications များ, NOTICIAS
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကလူသိများသောဗားရှင်းအသစ်ကိုကတည်းက စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ (ဖ်) ဝဲ (SGP) de ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် ကိုခေါ် "OpenProject"ဒီနေ့ဒီအရေးအကြီးဆုံးအကြောင်းအရာကိုသိဖို့ဒီစာကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်ကပ်အပ်နှံပါလိမ့်မယ်။
သတိပြုသင့်သည် SGP ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များ မတူကွဲပြားစွာအတွက်အများအပြား၏နေ့စဉ်အသက်တာ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနှင့်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းများ ကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအမျိုးမျိုးသောနယ်ပယ်ကနေပညာရှင်များအဖြစ်။ ထို့ကြောင့် SGP အကြိမ်ပေါင်းများစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည် မဟာဗျူဟာမြောက်အားသာချက် ထိုကဲ့သို့သောဆန်းသစ်သောကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသည်။
ပထမဆုံးအကြိမ်မှတ်ချက်ချပြီးပါပြီ SGP ဘလော့ဂ်ထဲမှာ, ဒါပေမယ့်အကြောင်းကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ပါ "OpenProject"။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုခဲ့သည့်နောက်ထပ် GSP တစ်ခုကိုခေါ်ဆိုသည် "ProjectLibre"။ အောက်ပါအတိုင်းယခင်ကအခွင့်အလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသည်။
"အကယ်၍ သင်သည်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်စေ၊ သာမန်အသုံးပြုသူဖြစ်စေ ၄ င်းတို့၏စီမံကိန်းများကိုစီမံရန်လိုအပ်သူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်သင် Microsoft Project ကိုအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်သည်သတင်းကောင်းကိုကျွန်ုပ်ပေးနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌အခမဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း ၎င်းသည်အခမဲ့သာမဟုတ်ပါ။ တီထွင်သူများ၏အဆိုအရကန ဦး အယူအဆမှာ ProjectLibre Project Server ဟုခေါ်သော Microsoft Project Server ကိုအစားထိုးရန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ပထမ ဦး ဆုံးသူတို့အနေနှင့် desktop အတွက် tool တစ်ခုနှင့်ဆာဗာများအတွက်ဗားရှင်းကိုကမ်းလှမ်းရမည်ကိုသဘောပေါက်ခဲ့ကြသည်။" ProjectLibre - Microsoft Project အတွက်ရွေးချယ်စရာ
ProjectLibre - Microsoft Project အတွက်ရွေးချယ်စရာ
အခြားသူများကို SGP သို့မဟုတ်အလားတူ (အခြားရွေးချယ်စရာ) ရှိပြီးသား ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဘာတွေလဲ အခမဲ့သို့မဟုတ် "freemium" ၎င်းတို့သည်: Asana၊ ClickUp၊ Kanboard၊ Basecamp၊ အယူအဆ၊ Quire၊ Redmine၊ Taiga၊ Trello နှင့် Wrike တို့ဖြစ်သည်။
1 OpenProject Open Source Project Management ဆော့ဝဲလ်
1.1 OpenProject ဆိုတာဘာလဲ။
1.3 ဗားရှင်း ၂၀၁၁.11.3.1 အသစ်
1.4 Download, တပ်ဆင်, အသုံးပြုပါ
OpenProject Open Source Project Management ဆော့ဝဲလ်
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, "OpenProject" ၎င်းကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည် -
"၎င်းသည်လုံခြုံသောဝန်းကျင်ရှိဂန္ထဝင်၊ ခေတ်မီသွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေ၊ ပေါင်းစပ်ထားသောစီမံကိန်းများကိုထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်ဖန်တီးထားသော open source Project Management Software ဖြစ်သည်။"
နေစဉ်, သူ့၌တည်၏ GitHub ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်ပါအတိုင်းအကျဉ်းချုံးဖော်ပြထားသည် - \_ t
"web-based စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု software ကို။"
"OpenProject" ၎င်းသည်များစွာသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးထားသည်။ ဥပမာစီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးစုံ၊ အဖွဲ့လိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (စီမံခြင်း) နှင့်စီမံထားသောစီမံကိန်းများ၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးတွင်ထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုများ။
ထို့အပြင်၎င်းသည်အလုပ်များစီမံခြင်း၊ bug ခြေရာခံခြင်း၊ လိုအပ်ချက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ အစည်းအဝေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
ထို့အပြင်၎င်းသည်ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ အခမဲ့အသိုင်းအဝိုင်းထုတ်ဝေမှု၊ တိမ်တိုက်ထုတ်ဝေမှုနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာထုတ်ဝေမှုတို့ဖြင့်ရရှိသည်။ ၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏ကိုယ်ပိုင်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင်တပ်ဆင်ရန်၊ အချက်အလက်များ၏ ၁၀၀% ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ပိုင်ဆိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
"OpenProject သည်အဖွဲ့များကိုသူတို့၏လုပ်ငန်းများကိုခြေရာခံရန်နှင့်ရလဒ်များရရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည်ရည်မှန်းချက်များကိုသိပြီးအဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်အခြားအသင်းဖော်များအားတာဝန်များကိုတာ ၀ န်ပေးခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။ OpenProject ဖြင့်သင်၏အလုပ်နှင့်ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုတစ်နေရာတည်း၌ရှိသည်။"
ဗားရှင်း ၂၀၁၁.11.3.1 အသစ်
နံပါတ် ၁၁.၃.၁ အရရရှိနိုင်သည့်မူကွဲအသစ်သည် ၆/၀၈/၂၀၁၁ ရက်ကိုထုတ်ပြန်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော bug fixes အမျိုးမျိုးပါ ၀ င်သည် link ကို။ လက်ရှိနှင့်ယခင်ဗားရှင်းတစ်ခုစီ၏သတင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါတို့ကိုလေ့လာနိုင်သည် link ကို.
Download, တပ်ဆင်, အသုံးပြုပါ
၎င်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်၎င်းကိုအားလုံးနီးပါးတွင်တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သည် GNU / Linux Distros၊ မှတဆင့် အထုပ်မန်နေဂျာ terminal ကို (console ကို) ကဇာတိ။ ထိုအ၏ download, တပ်ဆင်ဘို့ နောက်ဆုံး de la အသိုင်းအဝိုင်း Edition ကို သင်အောက်ပါကို run နိုင်ပါတယ် တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အောက်ပါတွင်ဖော်ပြထားသည် link ကို။ ထို့နောက်ကွပ်မျက်ခြင်းဖြင့်ပြီးအောင် "OpenProject" အားဖြင့် web browser ကို အကြိုက်ဆုံး။
လျှောက်လွှာနှင့်ယင်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်၎င်းကိုသင်လေ့လာနိုင်သည် စာရွက်စာတမ်းအပိုင်း လာမယ့်အတွက် start ကနေ link ကို.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အသိအကျွမ်းအကြောင်းကို စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ (ဖ်) ဝဲ (SGP) de ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် ကိုခေါ် «OpenProject» နှင့်၎င်း၏ဗားရှင်းအသစ် « 11.3.1 » မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » OpenProject: Project Management ဆော့ဝဲလ်၏ဗားရှင်း ၁၁.၃.၁ အသစ်